musha Europe Vatambi veRugby Antoine Dupont Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Antoine Dupont Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehuhu hwake hwehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Mukadzi kuva, Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo uye Net Kukosha.
Mumashoko akareruka, tinokupa iwe nerwendo-rwehafu rwendo rwehupenyu, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti akudze chishuwo chako chehupenyu, heino hujaya hwake kugalari yevakuru - pfupiso yakakwana yeAntoine Dupont's Biography.
Antoine Dupont Biography - Kubva paUpenyu hwake hwepakutanga kusvika panguva yekurumbira.
Ehe! munhu wese anoziva izvozvo Antoine Dupont akahwina mutambi akanakisa weSatan Nations Tournament muna 2020.
Nekudaro, vashoma chete vateveri vakaverenga nezve Hupenyu Hwake Hupenyu, iyo inonakidza kwazvo. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Antoine Dupont Yemwana Nhau:
Kune vatangi veBiography, iye ane zita remadunhurirwa rekuti "Vakapihwa". Antoine Dupont akazvarwa pazuva re15th raNovember 1996 kuna amai vake, Marie-Pierre Dupont, uye baba, Jean muLannemezan, France.
Akauya munyika ino semudiki pavana vaviri akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Sangana naMarie-Pierre Dupont, iye oga mubereki mupenyu waAntoine.
Antoine Dupont Kukura Mazuva:
Iyo scrum-hafu haina kurererwa kwaakaberekerwa (Lannemezan) asi mumusha mudiki weCastelnau-Magnoac.
Kare kumashure, Antoine akakura nemukoma wake, Clement, aive mukuru kwaari nemakore mana. Somukomana mudiki, mukomana ane vhudzi-bvudzi aisaparadzaniswa nebhora re rugby.
Pakanga pasina chinhu chaigona kuuya pakati pemwana mudiki nebhora rake rakasangana.
Muchokwadi, akapedza yakawanda yenguva yake achikandira bhora naClement pasi pechitsiko, padyo netambo yeimba yavo.
Nenzira iyoyo, mai vake vaisafanira kutamburira kutsvaka vakomana vavo pese pavaida kutarisirwa navo.
Antoine Dupont Mhuri Yemhuri:
Naamai vake vachishanda semukoti wepfungwa uye baba vake vachipfuya nguruve nhema, imba yake yakabudirira semhuri yepakati.
Kunze kwebasa ravo, vana vaAntoine vanewo kufarira zvikuru Rugby.
Hazvishamisi kuti aingova nemakore matatu nehafu apo vabereki vake vakamupa bhora rake rekutanga rerugby.
Chimwe chinhu chakanaka nezve menage yake inyaya yekuti ivo vakabatana nerudo rwavo rusingaperi rwemutambo.
Antoine Dupont Akatangira Mhuri:
Sezvambotaurwa, musha wake unogara vanhu vanopfuura mazana masere uri pakati peAuch neTarbes.
Runyerekupe rune kuti Antoine akasungirirwa kunzvimbo yake yeKutanga zvekuti akambotya kushanyira rimwe guta.
Zvichida iwe hauna kuziva kuti Castelnau-Magnoac iguta riri muHautes-Pyrénées department kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweFrance.
Pasina kukahadzika, guta rekumusha kwake ndiro musimboti webasa rake rekuvandudza.
Antoine Dupont Dzidzo uye Basa RekuvakaUp:
Pane rimwe zuva rakaipisisa, apo mwanakomana wekupedzisira wemhuri yekwaDupont akatevera mai vake kunhandare, kuda kwake Rugby kwakakura kusvika padanho rakasiyana chose. Kubva ipapo Antoine akazoita zvakanyanya nezvekuva nyanzvi mune mutambo.
Paaidzidza nesimba kuchikoro, vabereki vake vakaita kuti ajoine Magnoac FC paakavhara 4 makore. Kazhinji, aishanyira nhandare iyo iri pamusoro pe100m kumba kwake.
Ikoko, akaedza hunyanzvi hwake uye kugona kurwisa shamwari dzake dzaive dzakura kupfuura iye gore.
“Munguva yehudiki hwangu, ndaive nechokwadi chekuti ndaita basa rangu rechikoro zvakanaka, uye mamakisi angu kuchikoro aive akanaka.
Panguva imwecheteyo, ndairemekedza, kugona, uye ndakazvipira kusimudzira matarenda angu mu rugby. Ehe, ini handina kuita chero chinhu chikuru chakapusa. ”
Ona kuti anotaridzika sei zvishoma pakati pezera rake muMagnoac FC.
Paakasvitsa makore matanhatu, Antoine akakumbira iyo Jersey yeToulouse Frederic Michalak naClement Poitrenaud sechipo chake cheKisimusi. Ehezve, kurota kwake kwaive kune rimwe zuva chimiro cheTououse.
Antoine Dupont Ekutanga Basa Roupenyu:
Mukuda kuona kuti mwanakomana wavo awane nzvimbo iri nani, amai vaAntoine vakamuita kuti ajoine Auch (makiromita makumi mana nemana) vachirasikirwa nekirabhu yake yekurota, Toulouse (42 km).
Akatora danho rakaomarara nekuti aisada kuti mwanakomana wake wemakore gumi nemashanu ave kure nemusha uye chikoro futi.
Paakasvika kuAuch, Dupont akazove ari mudiki uye mudiki pane mwana. Nekudaro, akashanda zvakaomarara uye akachinja muviri wake kuita wemuvhivheti wetsiva.
Kuita kwake paAuch kwakaratidza kuti saizi kana zera haritsanangure tarenda.
Semutambi akasarudzika uye anozvininipisa muboka rake revechidiki, akawana kuyemurwa nevarairidzi vake uye nepamusoro. Nekudaro, ivo vakamubatsira kukudziridza kumhanyisa kwake, kuyerera uye hunyanzvi pfungwa pasina nguva iri kure.
Antoine Dupont Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Paakatanga kuwana mukurumbira mumutambo uyu Auch akadzoserwa kumwaka wa2013-14 Rugby Pro D2 mugore ra2014.
Dambudziko iri rakashungurudza vabereki vake nedzimwe nhengo dzemhuri. Zvisinei, kusuwa kwake kwakazove chikomborero mukuzvibatanidza paakabatana naCastres muTop 14 mumashure.
Nesimba rake risingaenzaniswi, iyo scrum-hafu yakaita simba rakakura panguva yaive kuCastres.
Nekuenda kwake kuTop 14, Dupont akaita makumi matanhatu neshanu uye akawana rekodhi yemapoinzi makumi mana nemana emaCastres. Kuita kwake hakuna kuenda kusingaonekwe sezvo mascouts aiongorora kuvandudzwa kwake.
Antoine Dupont Biography - Kubudirira Nhau:
Sekufanirwa kuve nazvo, rake rakakura basa rakabudirira paakauya apo Stade Toulousain akamutora munaNovember 2016.
Ehezve, mufaro wake waisaziva muganho sezvo iye pakupedzisira anowana mukana wekutambira timu iyo yaakatsigira muhucheche hwake.
Kurota kwake kwakave kwechokwadi sezvaanoratidzira Toulouse.
Guess what?… Antoine Dupont akaedza kubatsira Toulouse mukuhwina kwavo 48-24 neStade Francais muna Ndira 2021. Izvi ndizvo vatsigiri vakawanda vanomuti iye 'inoshamisa halfback'.
Panguva yekunyora iyi Bio, Dupont akazvimisikidza setarenda risingaenzaniswi muchikwata chenyika yeFrance.
Chii chimwe?… sport360.com yakamuisa pakati pevatambi vechidiki ve rugby ve 2020. Vamwe vese sezvavanotaura inhoroondo.
Antoine Dupont naCharlene - Nyaya Yerudo:
Achienderera kuhupenyu hwehukama hwake, iyo scrum-hafu yakambodanana nemukadzi mumwe chete kubva paakasimuka mukurumbira.
Ehezve, Dupont ane hunhu hwakavanzika hunoita kuti ataure zvishoma kana kuratidzira musikana wake. Zvisinei, takaona kuti ari kufambidzana nemusikana akanaka anonzi Charlene.
Iye haagone kumira kunyemwerera padhuze nemusikana wake. Iye zvirokwazvo akanaka musikana.
Kutonga nerudo rwake rukuru kwaari, pane mukana wakawanda wekuti anogona kupedzisira ave mudzimai wake weramangwana. Sezvineiwo, shiri dzerudo dzawana mvumo yehama naamai vaDupont.
Ingori nyaya yenguva asati asunga banga naCharlene, musikana wake. Isu tinovimba anosvika pakunakidzwa nehupenyu hunofadza hwewanano senge Jonathan sexton mune ramangwana.
Antoine Dupont Hupenyu hweMunhu kure neRugby:
Chii chinoita kuti chiratidzo cheFrance chikobvu? Kutanga, persona yake musanganiswa weScorpio zodiac chiratidzo. Sezvinotarisirwa, Dupont munhu akadzikama uye akaunganidzwa.
Kure kure nenzvimbo, anowanzo kuwanikwa kunzvimbo chaidzo. Ehezve, haatombopinda mumatambudziko uye zvakare anonzwisisa chinongedzo chekurarama hupenyu hunofadza.
Achienderera kumberi kuzvido zvake, Dupont aratidza kufarira kwakawanda mumavhiri maviri. Kunyangwe aine mota zhinji dzekunze, ane zvipo dzimwe nguva anofarira kufukidza madaro mafupi pabhasikoro rake.
Moreso, iye anoda hove pese paanenge ajekesa purogiramu yake yezuva.
Nemubhadharo wake muhombe, Dupont anogona kuita chero chaanoda. Izvo zvinosanganisira kukwira bhasikoro uye kubata hove kuti ufare.
Mararamiro uye Net Kukosha:
Iwe unogona kuzadzikisa kubudirira kumwe chete kwezvemari sehafu yehafu, kunyangwe kana rugby risiri iro basa rako. Asi iwe unofanirwa kuunganidza inokosheswa Net Kukosha kwemadhora mashanu mamirioni sezvaanoita muna 5.
Nemubhadharo wakakura kudaro, Dupont akave nechokwadi chekuti anogutsa kuravira kwake kwezvinhu zveumbozha nekutenga imba yakanaka uye zvimwe zvinodhura. Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, iye ane dzinenge mbiri mota dzekunze dzatinoziva nezvadzo.
Ehezve, iye ane kuravira kwekutasva mota dzepamusoro-soro.
Antoine Dupont Mhuri:
Sezviri pachena, Mutambi weRugby akaberekerwa mune mamenage evashanyi. Kunze kwemabasa avo epamutemo, dzinenge nhengo dzese dzemhuri yaDupont mubiki ane tarenda. Muchikamu chino, isu tichafumura zvimwe chokwadi nezvavo.
Nezve Baba vaAntoine Dupont:
Baba vake Jean, vanogara vari munhu wekutanga waaigara achitendeukira kwaari pese kana zvinhu zvikashata. Baba vaDupont vakapfuya nguruve nhema kuti vawane mari. Aive murume anoshanda nesimba uye aida rugby zvakare.
Unoziva?… Nguruve nhema dzeBigorre dzakasungwa nababa vaHalfback dzakapotsa dzave panjodzi pakupera kwema1980.
Kutenda kusimba kwevamwe varimi vanobva kuBigorre (kusanganisira baba vaAntoine nasekuru vake) nguruve hadzina kuzopera.
Pandinonyora Bio ino, Baba vaAntoine's Dupont vane chirwere chisingarapike zvichitevera tsaona uye vari kurapwa munzvimbo ine hunyanzvi - mumwe munhu ari pedyo nemhuri akadaro.
Nezve Amai vaAntoine Dupont:
Panguva yekunyora iyi Bio, mubereki wake mumwe chete achiri mupenyu ndiMarie-Pierre Dupont. Ndiye mai vake uye rudo rwekutanga. Kunyangwe mushure mekufa kwababa vake, amai vaDupont havana kumbomira kutsigira basa ravo.
Aive mukoti wepfungwa asi aigara achipa nguva yevanakomana vake. Sezviri pachena, sarudzo dzake dzakapesvedzera iyo Chikamu cheHupenyu Hupenyu Hupenyu zvakanaka.
Haangambokanganwa zvibayiro zvaamai vake.
Nezve Vanin'ina vaAntoine Dupont:
Pasina kukahadzika, haana zano rekuti zvinoita sei kuva nehanzvadzi. Nekudaro, Antoine Dupont ane hama ine hanya ine zita rekuti Clement. Vaive shamwari dzehudiki dzaitamba mitambo yemavhidhiyo nhabvu pamwechete.
Vakoma vacho vagara vakagovana chisungo chisinga tsanangurike kubvira vachiri vakomana vadiki.
Chimwe chinhu chinonakidza nezvehama dzehama ndechekuti vese vakatora rugby zvidzidzo kubva kuna babamunini vavo vachiri vadiki. Asi Clement akabva aziva kuti tarenda rake harisi mubharumu rehoriyamu.
Nekudaro, akaisa pfungwa yake pakudzidza nezve kuberekesa nguruve nhema kubva kuna babamunini vake ndokutora bhizimusi rababa vake mushure mekufa kwake.
Aifanira kuenderera nenhaka yababa vake. Nekudaro, Clement akatanga kusimudza nguruve nhema zvakare.
About Antoine Dupont's Hama:
Kutanga uye pamberi pezvese, sekuru vake, Pierre Dupont, vaive mukurumbira muridzi wehotera uye aida rugby. Aiwanzogadzirira chikafu chemhuri yese pese pavaishanyira nhandare kuzoona mutambo.
Imwe hama inozivikanwa yakakonzera hupenyu hwaDupont ndiJean-Luc Gales, babamunini vake. Jean-Luc akava mudzidzisi wavo wekutanga mu rugby.
Akadzidzisa hama dzese matekinoroji nemitemo yavaida kuti vadzidze nezvemutambo pavaikura.
Sangana nasekuru vake, Jean-Luc Gales (L) uye mukoma, Clement (R).
Antoine Dupont Untold Chokwadi:
Kuputira iyo hafu backback's Biography, heano mashoma echokwadi nezvake izvo zvaizokubatsira iwe kuti uwane ruzivo rwakazara nezve Hupenyu Hwake Nyaya.
Chokwadi # 1: Hupombwe Hwake Hwechidiki Hwakaziviswa:
Semukomana mudiki, Dupont aigara achinyanya kushingaira, kugunun'una, uye dzimwe nguva kurwadza. Aifarira kudya zvakanyanya uye aisamboziva nguva yekumira kusvika mudumbu morwadza.
Rakanga riri dambudziko rake guru pauduku hwake. Zvakadaro, rugby yakagadzirisa zvese izvi zvakaipa zvake zvekare.
Chokwadi # 2: Iyo Gut Kuti Usambofa Wakasiya.
Dupont paakapinda murugby nemazvo, aive padanho rakasiyana kubva kuvana vakuru kwaari nemakore maviri. Nekudaro, aifanira kutanga nevana mukati mezera rake bracket muU8s.
Izvi zvakaita kuti afinhiswe nerugby kusvika pakuda kumisa mutambo uye kuedza nhabvu uko shamwari dzake shoma dzaitamba.
Chokwadi # 3: Hupenyu hweChikoro:
Asati abudirira mumutambo werugby, Dupont aida kudzidza fizikisi uye chemistry.
Nekudaro, budiriro yake ine chekuita nemitambo yakamuita kuti adzidze sainzi yemitambo uye manejimendi emitambo mushure. Kunze kwemitambo, Dupont zvakare yakasarudzika mune zvedzidzo.
Chokwadi # 4: Kutya Kwakanyanya Kwake Basa Rake:
Kufanana nevamwe vatambi vese, imwe yemhinganidzo huru Dupont akamboona kukuvara.
The halfback akambotya kusakwanisa kutamba rugby zvekare mushure mekukuvara musana. Nekutenda, akagamuchira kurapwa kwakamubatsira kuti adzokere patsoka dzake.
Chaizvoizvo, kufunga kwakanaka kwaive kiyi yekubudirira kwake mumitambo. Saka nekudaro, Dupont haana kumboona chero chikonzero chekuzvinzwira tsitsi.
Kunyangwe pakatarisana nematambudziko nematambudziko, aigaro chengetedza pfungwa yakajeka nekusimbisa kwakanaka. Nekudaro, Dupont akakwanisa kukunda pamusoro pematambudziko ake.
Tinorumbidza vabereki vake nemukoma wake nekumubatsira paakapinda munzira yekuzadzisa zviroto zvake.
Baba vake vaizodada nebudiriro yake dai vaive vapenyu. Hazvirambiki kuti kubudirira kwake kwave kuchifadza mhuri yake yakakura.
Ndatenda nekuverenga yedu Antoine Dupont Biography. Nomutsa taura nesu kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chisiri chakakodzera nechinyorwa chino. Zvakare, tarisa pfupiso yeScrum-back's memoir mutafura iri pazasi.
Zita rizere: Antoine Dupont
Zita rekudanwa: The Gifted
Nzvimbo yekuzvarirwa: Lannemezan, France
Amai: Marie-Pierre Dupont
Vanun'una: Clement Dupont (hama)
Basa: Mutambi weRugby
kukwirira: 1.74 m (5 ft 8 mukati)